MPISOLOVAVA AMIN'NY LOZA
MPISOLOVAVA AMIN’NY LOZA
Ary tsy foana ny atao fanahy iniana
Hatairana ny mpandray anjara ao amin’ny fitaterana loza mahatonga tena sarotra ny fandalinana ny toe-javatra ny raharaha, ary ny zava-nitranga dia mety hiafara amin’ny heloka bevava madio, ny filaminana tsy manampy na iza na iza.
Tsy azo lavina fa maro ireo lozam-pifamoivoizana amin’ny vokany lehibe azo amin’ny fifanajana ny mpamily sy ny mpandeha an-tongotra. Saingy misy tanjona ny antony dia tsy mba hisorohana ny fifandonana, ohatra, ny tsy fahatomombanana ara-teknika, na mahantra tazana teny an-dalana.
Tokony entina ao an-tsaina fa ny mombamomba ny mpisolo vava no tena zava-dehibe na inona na inona no tohiny ara-pitsaràna. Ny zo amin’ny raharahan-loza mety fomba mahomby indrindra ho voaaro amin’ny alalan’ny mpisolovava amin’ny traikefa ao amin’io faritra io ny lalàna. Na izany aza, raha toa ianao manana ny mety, na ny fotoana ny hahita azy, na dia amin’ny Ankapobeny ny mombamomba, dia ho azo antoka kokoa noho ny tsy miankina miezaka ny hiaro ny tenany amin’ny fanantenana ny vintana.
Farafahakeliny dia ho afaka manazava aminao ny zavatra mba miteny, ary inona no tsy
Indraindray dia efa ampy ho mpikambana ao amin ny heloka bevava ny raharaha mikasika lozam-pifamoivoizana no tsy vao maika mampitombo ny toe-draharaha
Inona no Asa Lalàna. Lasa Asa Mpisolovava